CNRG: Umsebenzi Wezemigodi Usuphazamisa Ezokulima
Impumela yenhlolisiso ephezu kobudlelwano obukhona phakathi kukazulu labamankampani emba amatshe aligugu eyenziwe ngabe Centre for Natural Resources Governance, iveza ukuba lanxa uhulumende ekhuluma ngentuthuthuko ekhona kuloluhlangothi, seluphazamise ezokulima elizweni, kwabangela ubuyanga kuzulu, okwenza angalujabuleli loluhlangothi.
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni wokwethula le i-report emumethe impumela yenhlolisiso walumumo, wenkokheli zenhlanganiso ezisebenzelana lozulu kunhlangothi ezehlukeneyo, owenzelwe eweteleni yeHoliday Inn ngoLwesithathu.
Emazwini akhe esethula li-report, umqondisi wenhlanganiso ye CNRG, umnumzana Farai Maguwu uthe okudanisayo yikuba uhulumende akenzi lutho ukudinga indlela zokulungiselela ikusasa yelizwe lapho esemalutshwana amatshe aligugu,kubulala ezinye inhlangothi okubalisa ezokulima lokuvuselelwa kwamankampani.
Wengeza uMaguwu ethi okudanisayo kuyikuba ulibele uhulumende sewazitshela ukuba azatholakala ngokunaphakade lamatshe kungakho singekho isidingo sokulondoloza ezokulima, osekubangele ukusilela kokudla elizweni, esebenzisa imali enengi ukuthenga ukudla kwamanye amazwe.
Bezikhona inkokheli zokholo kulomhlangano okubalisa umfundisi Shatai waseMutare otshengise ukukhathazeka phezu kwendubo esezilethwe luhlangothi lokwemba amatshe aligugu.
Sekudinga ukuba abantu basebenzele ndawonye, bakhulume ngalizwi linye ukubonisana phezu kwengozi ekhona kulokho okwenzakala kuhlangothi lolu, uhulumende akubone laye ukuba sekuphazamisa kanjani ezokulima kuveza umfundisi Shatai.
Impumela yalenhlolisiso, iveze njalo ukuba luphathwa ngendlela eyimfihlo loluhlangothi, uzulu esebona kuphela ngokususwa endaweni abekade ehlala kizo, esethathelwa lamasimu abekade emphilisa kwandulela umsebenzi wokwemba.
Kuvele njalo ukuba zingaphiwa thuba izakhamizi, ukutsho imibono yazo lapho uhulumende ekhulumisana labamankampani wokwemba la.
Lukhanya luphethwe ngabezombusazwe labezomvikela loluhlangothi kungavezwa egcekeni okwenzakalayo kilo, uzulu esethuselwa lapho efuna ulwazi.